Global Voices teny Malagasy · Fanomezana
Fanomezana	Mila ny fanohananao ny Global Voices hahafahany mahaleo tena, malalaka ary hiasa maharitra
Ny fahalalaha-tananao no ho fanohanana ny ezak'ireo mpanolo-tena, izay tsy mitsahatra ny manome anao fitantarana avy amin'ny fitaovam-pampitam-baovao ataon'olo-tsotra manerantany. Raha misy ireo fikambanana mpanao asa-soa misahana ny ampahany be amin'ny fandaniana, ny fandraisana anjara na voatsirambin'ny tanana avy amin'ny malala-tanana tsy miankina toa anao kosa no mandrafitra ny ampahany be amin'ny fanomezana vatsy ho anay sy entina andoavana ny fandaniana atao amin'ny lohamilina, fandraharahana ankapobeny ary anefana solon-karama kely isam-bolana ho an'ireo tonian-dahatsoratra isam-paritra sy ireo mpitantana ambony vitsivitsy ato aminay.
Fanomezana atao amin'ny alalan'ny aterineto Hivantana any amin'ny Friends of Global Voices ny fitia tsy mba hetra ataonao. Eken'ny Paypal avokoa ny karatry ny fahana etsy ambony (tsy voatery hanana kaonty).
Fandraisana Anjara Isam-bolana Fanohanana maharitra ho anay hahatonga ny Global Voices ho maimai-poana ho an'ny rehetra ny fanaovanao fanomezana isam-bolana.
Fanomezana atao sheky na amin'ny alalan'ny famindran-bola na fandefasam-bola amin'ny banky na ireo sampan-draharaha misahana izany
Manorata sheky omena ny “Friends of Global Voices” ary alefaso amin'ny :
FRIENDS OF GLOBAL VOICES
c/o Ivan Sigal
1644 Monroe Street, NW
Anaran'ny banky: Citibank
ABA #: 254070116
Adiresin'ny Banky: 1225 Connecticut Ave, NW, Washington, DC 20036
Anaran'ny andefasana: Friends of Global Voices
Laharan'ny kaonty banky andefasana azy: 15661970
kaody Swift: Citius33
Ho an'ny Mponina Eoropeana kosa:
Anaran'ny banky: ABN-AMRO
IBAN #: NL54ABNA0489951147
Adiresin'ny Banky: Sarphatistraat, 1000 BG Amsterdam, Pays-Bas
Anaran'ny andefasana: Stichting Global Voices
Adiresin'ny andefasana: Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam
Laharan'ny kaonty banky andefasana azy: 48.99.51.147
kaody Swift: ABNANL2A
Fanomezana Goavana, Fanohanan'ny Orinasa na Fikambanana, Misy Fanontaniana?
Raha te-hahalala bebe kokoa momba ny fanomezana, na hiresaka fanomezana goavangoavana, fanohanana, na fanohanana tetikasa manokana, miangavy manorata [amin'ny teny iraisampirenena] amin'ny donations@globalvoicesonline.org.
Manorata lahatsoratra amin'ny bilaogy momba ny fanomezana nataonao na siaho ny fanohananao amin'ny fampiasana ny tenifototra #givegv ao amin'ny Twitter. Hankasitrahanay ny tarehintsoratra 140 avy aminao!
Vao avy nanolotra fanomezana ho an'ny @globalvoices satria mino ny herin'ny fampitam-baovao ataon'olo-tsotra manerantany
Ampio ny iray amin'ireto hajia ireto ao amin'ny habakao ary asehoy amin'izao tontolo izao ny fitokisanao ny nampanirahana anay.
Jereo ny hajia rehetra ary otazo ny HTML »
Nampiana ny 21 Desambra 2013 5:18 GMT
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty Sokajy hafa
Tantara Malaza Indrindra Manerantany 4 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
14 Marsa 2012RosiaRosia: Firaisana ara-nofo, Vehivavy, Putin ary ny Lahatsary
Tahiry isam-bolana Septambra 2015 6 Lahatsoratra